မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းလေ့လာနိုင်တဲ့ ဘဝအကျိုးပြု အချက်လေးများ – Gentleman Magazine
မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းလေ့လာနိုင်တဲ့ ဘဝအကျိုးပြု အချက်လေးများ
လူတိုင်း ဘဝအကျိုးပြု မှတ်မိဖို့ လွယ်တာလေးတွေကို ကြိုက်ပါတယ်။ ၁ မိနစ်ဟာ တစ်စုံတစ်ခုကို မှတ်သားသိရှိဖို့ မလွယ်ဘူးထင်ရပေမယ့် အောက်ကအချက်လေးတွေကို မြင်လိုက်ရင်တော့ သင် အံဩသွားမှာပါ။
၁. အရာရာတိုင်းကို ဘာကြောင့်လဲ ပြန်မေးပါ
စီးပွားရေးကိစ္စမှာတင်မဟုတ်ပဲ သင့်ဘဝ အောင်မြင်မှု၊ ပျော်ရွှင်မှု၊ ဒေါသဖြစ်မှု အားလုံးအတွက် ဆုံးဖြတ်ချက် ချရင် ဘာကြောင့်လဲ ပြန်မေးပါ။ ဥပမာ ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်တာတွေ ဘာကြောင့် စားနေတာလဲ?? သင် လုပ်သင့်တဲ့ဟာတွေကို ဘာကြောင့် မလုပ်တာလဲ?? အဲဒိလို စဉ်းစားတာက လွယ်ကူပေမယ့် အရမ်းအကျိုးရှိပါတယ်။
၂. Print ထုတ်နေတုန်း မှင် အရမ်းမကုန်ရအောင်
စာကို အနက်ရောင်ကနေ မီးခိုးရောင်ကို ပြောင်းရိုက်ပါ။ အရည်အသွေး အရမ်းကွာမသွားပေမယ့် မှင်မကုန်တဲ့အပြင် Print ထုတ်တာလဲ မြန်စေပါတယ်။ ကမ္ဘာမြေကြီး စိမ်းလန်းဖို့လဲ အထောက်အကူ ပြုပါတယ်။
၃. နှာပိတ်နေတာကို ရပ်တန့်လိုက်ပါ
နှာခေါင်းထိပ် မျက်လုံးနှစ်လုံးကြားနေရာကို မျက်နှာကနေ ခွာသလို ဆွဲထားပါ။ အဲဒါက အဲဒိနေရာက အရိုးနုကို ဆန့်ပေးပြီး နှာပိတ်တာ သက်သာစေပါတယ်။ နှာစေးတော့မယ်ထင်ရင် တစ်ရှုးတစ်ခုယူပြီး ကြိုပြီးနှာချေထားပါ။ နှာစေးနေရင် လက်ညှိုးလက်မကို သုံးပြီး အပေါ်နှုတ်ခမ်းကို နှာခေါင်းဖျားနဲ့ ထိအောင် ဆွဲလှန်လိုက်ပါ။ လက်ချောင်းနှစ်ချောင်းဟာ နှာခေါင်းနှစ်ပေါက်နေရာမှာရှိအောင် နှုတ်ခမ်းကို ဆွဲလိမ်ထပါ။ ပြီးရင် သွားဖုံးနဲ့ အာခေါင် ဆက်နေတဲ့နေရာကို လျှာနဲ့ ဖိနိုင်သလောက် ဖိထားပေးပါ။ နှာခေါင်းထဲက ယားတာ ပျောက်တဲ့အထိ အဲဒိလို လုပ်ပေးပါ။
၄. အလုပ်စားပွဲမှာ ကြွက်သားလေ့ကျင့်မယ်
သင့်လက်နှစ်ဖက်ကို စားပွဲပေါ်မှာ ထားပြီး အောက်ကို ဖိနိုင်သလောက် ဖိချပါ။ သင့်ရဲ့ ကြွက်သားတွေ တင်းတောင့်လာတာ ခံစားမိပါလိမ့်မယ်။
၅. Email ရေးမပြီးသေးပဲ မှားမပို့ရအောင်
Email မှာ address ကို နောက်ဆုံးမှ ထည့်ပါ။ အဲဒိလိုဆို အဆုံးမသတ်ရသေးတဲ့ Mail ဘယ်တော့မှ မပို့မိတော့ပါဘူး။
၆. အိပ်ရာမဝင်ခင် စိတ်ရှင်းပါ
အိပ်ခါနီးရင် တစ်မိနစ်လောက် အချိန်ပေးပြီး တစ်နေ့လုံး လုပ်ခဲ့တာတွေ ပြန်စဉ်းစားပါ။ လုပ်သင့်ပေမယ့် ပျင်းနေလို့ မလုပ်မိတာတွေ၊ သင်လုပ်ခဲ့တာတွေကို ဘယ်လို ပိုကောင်းအောင် လုပ်နိုင်သလဲ။ အဲဒါကို ညတိုင်းစဉ်းစားပေးရင် ညကောင်းကောင်း အိပ်ပျော်ပါတယ်။
၇. ဆေးသောက်ပြီးပြီလား သိရအောင်
တစ်နေ့နှစ်ကြိမ် ဆေးသောက်ရရင် ဆေးဘူးကို မနက်သောက်ပြီးရင် အတည့်၊ ညနေသောက်ပြီးရင် ပြောင်းပြန် ထောင်ထားပါ။ သုံးကြိမ်သောက်ရရင် စားပွဲပေါ်မှာ နေရာသုံးခု သတ်မှတ်ပြီး ရွှေ့ထားပါ။ အဲဒါဆို ကိုယ့်ဘာသာဆေးသောက်ပြီးမပြီး မမှတ်မိရင် ပြန်လာကြည့်လို့ ရပါတယ်။
၈. ဖုန်း ဘက်ထရီ ချွေတာရအောင်
Wifi မရှိရင် Wifi ပိတ်ထားပါ။ ဖုန်းလိုင်းမမိရင် Airplane Mode ဖွင့်ထားပါ။ သင့်ဖုန်းက လိုင်းမိမနေရင် သူချိတ်စရာ လိုင်းတစ်လိုင်းကို အသည်းအသန် လိုက်ရှာနေလို့ အားကုန်စေပါတယ်။
၉. အလုပ် ပိုပြီးတွင်ကျယ်အောင်
မနက်စောစော နိုးတာနဲ့ ဒီနေ့ ဘာတွေလုပ်မယ်ဆိုတာ အစီအစဉ်ချပါ။ ဖုန်းဖွင့်ကြည့် FB ထိုင်စစ်ရင်း အချိန်မကုန်ပါနဲ့။ အစီအစဉ်ချတာဟာ ဦးနှောက်ကို ပင်ပန်းစေတဲ့ အလုပ်ဖြစ်လို့ မနက်စောစော အားပြည့်တုန်း လုပ်သင့်ပါတယ်။
၁၀. ကားဆီထည့်ပေါက် ဘယ်ဘက်မှာရှိလဲ
သင့် Dash Board ပေါ်က ဆီမီတာဘေးမှာ မြှားသေးသေးလေး ပါပါတယ်။ အဲဒါဟာ သင့်ကားရဲ့ ဆီတိုင်ကီဖုံး ရှိတဲ့ဘက်ပါ။ လူတွေက တစ်ခါတစ်လေ ယောင်ပြီး ဆီတိုင်ကီဖုံး ဘယ်ဘက်ရှိလဲဆိုတာ စဉ်းစားမရလို့ပါ။
မိနဈအနညျးငယျအတှငျးလလေ့ာနိုငျတဲ့ ဘဝအကြိုးပွု အခကျြလေးမြား
လူတိုငျး ဘဝအကြိုးပွု မှတျမိဖို့ လှယျတာလေးတှကေို ကွိုကျပါတယျ။ ၁ မိနဈဟာ တဈစုံတဈခုကို မှတျသားသိရှိဖို့ မလှယျဘူးထငျရပမေယျ့ အောကျကအခကျြလေးတှကေို မွငျလိုကျရငျတော့ သငျ အံဩသှားမှာပါ။
၁. အရာရာတိုငျးကို ဘာကွောငျ့လဲ ပွနျမေးပါ
စီးပှားရေးကိစ်စမှာတငျမဟုတျပဲ သငျ့ဘဝ အောငျမွငျမှု၊ ပြျောရှငျမှု၊ ဒေါသဖွဈမှု အားလုံးအတှကျ ဆုံးဖွတျခကျြ ခရြငျ ဘာကွောငျ့လဲ ပွနျမေးပါ။ ဥပမာ ကနျြးမာရေးနဲ့ မညီညှတျတာတှေ ဘာကွောငျ့ စားနတောလဲ?? သငျ လုပျသငျ့တဲ့ဟာတှကေို ဘာကွောငျ့ မလုပျတာလဲ?? အဲဒိလို စဉျးစားတာက လှယျကူပမေယျ့ အရမျးအကြိုးရှိပါတယျ။
၂. Print ထုတျနတေုနျး မှငျ အရမျးမကုနျရအောငျ
စာကို အနကျရောငျကနေ မီးခိုးရောငျကို ပွောငျးရိုကျပါ။ အရညျအသှေး အရမျးကှာမသှားပမေယျ့ မှငျမကုနျတဲ့အပွငျ Print ထုတျတာလဲ မွနျစပေါတယျ။ ကမ်ဘာမွကွေီး စိမျးလနျးဖို့လဲ အထောကျအကူ ပွုပါတယျ။
၃. နှာပိတျနတောကို ရပျတနျ့လိုကျပါ
နှာခေါငျးထိပျ မကျြလုံးနှဈလုံးကွားနရောကို မကျြနှာကနေ ခှာသလို ဆှဲထားပါ။ အဲဒါက အဲဒိနရောက အရိုးနုကို ဆနျ့ပေးပွီး နှာပိတျတာ သကျသာစပေါတယျ။ နှာစေးတော့မယျထငျရငျ တဈရှုးတဈခုယူပွီး ကွိုပွီးနှာခထြေားပါ။ နှာစေးနရေငျ လကျညှိုးလကျမကို သုံးပွီး အပျေါနှုတျခမျးကို နှာခေါငျးဖြားနဲ့ ထိအောငျ ဆှဲလှနျလိုကျပါ။ လကျခြောငျးနှဈခြောငျးဟာ နှာခေါငျးနှဈပေါကျနရောမှာရှိအောငျ နှုတျခမျးကို ဆှဲလိမျထပါ။ ပွီးရငျ သှားဖုံးနဲ့ အာခေါငျ ဆကျနတေဲ့နရောကို လြှာနဲ့ ဖိနိုငျသလောကျ ဖိထားပေးပါ။ နှာခေါငျးထဲက ယားတာ ပြောကျတဲ့အထိ အဲဒိလို လုပျပေးပါ။
၄. အလုပျစားပှဲမှာ ကွှကျသားလကေ့ငျြ့မယျ
သငျ့လကျနှဈဖကျကို စားပှဲပျေါမှာ ထားပွီး အောကျကို ဖိနိုငျသလောကျ ဖိခပြါ။ သငျ့ရဲ့ ကွှကျသားတှေ တငျးတောငျ့လာတာ ခံစားမိပါလိမျ့မယျ။
၅. Email ရေးမပွီးသေးပဲ မှားမပို့ရအောငျ
Email မှာ address ကို နောကျဆုံးမှ ထညျ့ပါ။ အဲဒိလိုဆို အဆုံးမသတျရသေးတဲ့ Mail ဘယျတော့မှ မပို့မိတော့ပါဘူး။
၆. အိပျရာမဝငျခငျ စိတျရှငျးပါ
အိပျခါနီးရငျ တဈမိနဈလောကျ အခြိနျပေးပွီး တဈနလေုံ့း လုပျခဲ့တာတှေ ပွနျစဉျးစားပါ။ လုပျသငျ့ပမေယျ့ ပငျြးနလေို့ မလုပျမိတာတှေ၊ သငျလုပျခဲ့တာတှကေို ဘယျလို ပိုကောငျးအောငျ လုပျနိုငျသလဲ။ အဲဒါကို ညတိုငျးစဉျးစားပေးရငျ ညကောငျးကောငျး အိပျပြျောပါတယျ။
၇. ဆေးသောကျပွီးပွီလား သိရအောငျ
တဈနနှေ့ဈကွိမျ ဆေးသောကျရရငျ ဆေးဘူးကို မနကျသောကျပွီးရငျ အတညျ့၊ ညနသေောကျပွီးရငျ ပွောငျးပွနျ ထောငျထားပါ။ သုံးကွိမျသောကျရရငျ စားပှဲပျေါမှာ နရောသုံးခု သတျမှတျပွီး ရှထေ့ားပါ။ အဲဒါဆို ကိုယျ့ဘာသာဆေးသောကျပွီးမပွီး မမှတျမိရငျ ပွနျလာကွညျ့လို့ ရပါတယျ။
၈. ဖုနျး ဘကျထရီ ခြှတောရအောငျ
Wifi မရှိရငျ Wifi ပိတျထားပါ။ ဖုနျးလိုငျးမမိရငျ Airplane Mode ဖှငျ့ထားပါ။ သငျ့ဖုနျးက လိုငျးမိမနရေငျ သူခြိတျစရာ လိုငျးတဈလိုငျးကို အသညျးအသနျ လိုကျရှာနလေို့ အားကုနျစပေါတယျ။
၉. အလုပျ ပိုပွီးတှငျကယျြအောငျ
မနကျစောစော နိုးတာနဲ့ ဒီနေ့ ဘာတှလေုပျမယျဆိုတာ အစီအစဉျခပြါ။ ဖုနျးဖှငျ့ကွညျ့ FB ထိုငျစဈရငျး အခြိနျမကုနျပါနဲ့။ အစီအစဉျခတြာဟာ ဦးနှောကျကို ပငျပနျးစတေဲ့ အလုပျဖွဈလို့ မနကျစောစော အားပွညျ့တုနျး လုပျသငျ့ပါတယျ။
၁၀. ကားဆီထညျ့ပေါကျ ဘယျဘကျမှာရှိလဲ
သငျ့ Dash Board ပျေါက ဆီမီတာဘေးမှာ မွှားသေးသေးလေး ပါပါတယျ။ အဲဒါဟာ သငျ့ကားရဲ့ ဆီတိုငျကီဖုံး ရှိတဲ့ဘကျပါ။ လူတှကေ တဈခါတဈလေ ယောငျပွီး ဆီတိုငျကီဖုံး ဘယျဘကျရှိလဲဆိုတာ စဉျးစားမရလို့ပါ။
Previous: တံတားတွေဆောက် လမ်းတွေဖောက်
Next: ယမကာဝိုင်းတို့အတွက် သိတတ်ရမည့် အချက်များ